China Model No: Chinese Manufacture Automatic Control YDJ Series Hydraulic Scrap Metal shear Baler Machine fekitari uye vatengesi | Mubatanidzwa Pamusoro
Hydraulic scrap metal shear baler muchina une mabhenefiti akanaka eindasitiri yekudzokorodza simbi. Mazuvano, kushomeka kwezviwanikwa idambudziko rakatarisana nenyika dzese. Hazvina mhosva kuti nyika dzichiri kusimukira kana dzakasimukira, maitiro ekuita zvakanakisa kudzokorodza inogara iri nyaya inopisa. Saka tinogadzira marudzi ese e hydraulic scrap metal shear baler muchina kuti vatengi vedu vabate nesimbi yavo yakaraswa kuti isangane nezvinodiwa nevatengi vedu.
Hydraulic scrap metal shear baler muchina, inoshandiswa zvakanyanya kune ese marudzi emhando dzakareruka uye dzakatetepa zvinhu, kugadzira uye hupenyu zvisaririra zvesimbi, chiedza chesimbi chimiro zvikamu, marudzi ese emapurasitiki asiri-ferrous simbi (stainless simbi, aluminium alloy, mhangura, nezvimwewo) compression packaging uye kuveura; Kana kuti tsvina yakananga yakamanikidzwa kurongedza.
Kusiyana nemabhero esimbi, iyi hydraulic scrap metal shear baler machine inogona kudzvanya nekugera simbi yakarasika.
●Hydraulic drive, yakatsetseka kushanda uye pasina ruzha, inokurumidza extrusion kumhanya, yakakura extrusion simba, compact block, isiri nyore kuparadzira.
● Adopt standard steel plate uye advanced welding tekinoroji, iyo mechanical parts inogara yakasimba, yakaderera kutadza mwero uye hupenyu hurefu hwebasa.
●A inotonhorera system inogona kuiswa kuti ivandudze kuenderera kwekushanda kwemidziyo uye kuderedza kukundikana kwehuwandu. Iyo yekutonhodza system inogona kukamurwa kuita kutonhora kwemvura uye kutonhora kwemhepo.
● Chisimbiso che cylinder chinotora mhete yeGRAI inotengeswa kunze kwenyika, iyo ine kushanda kwakanaka kwekuvhara uye kupikisa kwakasimba.
●Kuisa nyore, kutsika kwetsoka, kusina nheyo, nheyo, nezvimwe.
● Cold extrusion haichinje simbi yezvinhu uye inovandudza chiyero chekushandisa.
● Coefficient yakakwirira kudarika yechinyakare sando packaging, mechanical packaging, nezvimwe.
●PLC otomatiki kudzora iri nyore kushanda uye kuchengetedza.
● Yedu hydraulic scrap metal shear baler machine inogona kukubatsira kuchengetedza basa, kuvandudza simbi kupora, kuwedzera mutengo wekutengesa uye kuvandudza purofiti.
● Inogona kukubatsira kuchengetedza nzvimbo yekushanda, inobatsira kune saiti manejimendi.
●Vatengi vanogona kugadzirisa mapeji ekurongedza uye saizi zvinoenderana nezvavanoda pakutakura kana kuchengetedza.
● Inogona kukubatsira kuderedza mari yekufambisa, kuvandudza kushanda kwako
2. maitiro ekushanda: nekuda kwekushandiswa kwekufamba chinja-nzira mbiri, maviri shear stroke inogona kubatanidzwa otomatiki, otomatiki kutenderera.
Model Max Kucheka Simba (Toni) Dzvanya bhokisi saizi(mm) Bale size(mm) Shear frequency (nguva/miniti) Simba(kw)
YDJ-4000 400 4000×1500×800 500 × 400 4-7 2×45
YDJ-5000 500 5000×2000×1000 600 × 500 4-7 3×45
Yedu Hydraulic Scrap Metal shear Baler Machine inopa yakakurumbira mhando muchina zvikamu, tanga tichishandira pamwe nevazhinji vane mukurumbira pasi rose brand supplier, seSIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI uye zvichingodaro kweanopfuura makore gumi.
Iyo yakaderera modhi YDJ Series Hydraulic Scrap Metal shear Baler Machine inogona kuchengetedzwa zvakanaka mune imwe 40 HQ mudziyo. Kana ngarava nechikepe, isu tinovhara iyo poncho uye Mutoro dhizaini kuchengetedza yedu YDJ Series Hydraulic Scrap Metal shear Baler Machine.
Tarisa Hydraulic Scrap Metal shear Baler Machine yeSimbi Kudzokorodza muAction!
Zvakapfuura: Muenzaniso Kwete: NY Series hydraulic inopisa kutenderera yekuvhara muchina
Zvinotevera: Muenzaniso Kwete: Chinese Manufacture Manual Control Y82 Series Vertical Hydraulic isiri-simbi Press Baler Machine
Zvimedu Metal Compactor, Aluminium Foil Baler Machine, Y81 Hydraulic Baler, Pop-Pamusoro Inogona Baler Equipment, Leaf Compactor uye Baler, Homemade Cardboard Baler,